दिनेश यादव - कान्तिपुर समाचार
दिनेश यादव का लेखहरु
नोकरी गरेकै पसलमा मालिक
दिनेश यादव, कार्तिक १८, २०७४
जीवनमा केही गर्ने भोक र अभिलाषाका साथ अगाडि बढे जो कोहीले पनि सफलताको शिखर चुम्न सक्छन् । त्यस्तै चाहनाका साथ अघि बढेका अमेरिकी उद्यमी बिल माइकडरमोट आज सफल भएका छन् । आज उनीसँग नेम र फेम दुवै छ ।
इजराएली बारमा महिनावारी हुँदा वाइनमा छुट
दिनेश यादव, कार्तिक १४, २०७४
होटल, रेस्टुरेन्ट र बारहरूमा तपाईले ‘हयापी आवर’ का बारेमा पक्कै सुन्नुभएको होला । खासगरी चाडपर्वका अवसरमा होटल तथा बार सञ्चालकहरूले हामी कहाँ यस्ता आवरहरूमा विशेष छुटको योजना नै चलाउने गरेको पाइन्छ ।
विश्वकै धनाढय बने अमेजोनका मालिक बेजोस
दिनेश यादव, कार्तिक १३, २०७४
अमेरिकी ई–कमर्स कम्पनी अमेजोनका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) जेफ बेजोस विश्वकै सर्वाधिक धनाढय बनेका छन् । उनले आफ्नो कुल सम्पत्तिका साथ माइक्रोसफ्टका सहसंस्थापक बिल गेट्सलाई पछाडि छाडेका छन् ।
विलासी अर्बपतिका ११ प्रेमिका
दिनेश यादव, कार्तिक ११, २०७४
विचित्रको रै’छ, यो संसार । कसैलाई यहाँ खानै पुग्दैन, कोहीलाई भने विलासी जीवन बिताउनै भ्याइनभ्याई हुँदो रै’छ । दुई छाक टार्नैका लागि पनि केहीले कडा परिश्रम गर्नुपर्छ । तर, विश्वका केही धनाढयहरू आफूले कमाएको रकम कहाँ खर्चिने हो ? के गर्ने हो ? भन्ने ध्याउन्नमै रहेका भेटिन्छन् ।
दिनेश यादव, कार्तिक १०, २०७४
दिनेश यादव, कार्तिक ५, २०७४
के तपाईको कम्प्युटर सुरक्षित रहेको कुरामा तपाई ढुक्क हुनुहुन्छ ? यदि तपाईको उत्तर ‘ढुक्क छु’ भन्ने आउँछ भने तपाई गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ । किनभने ह्याकरहरु हाल धेरै उन्नत प्रविधिहरुको विकास गरिसकेका छन् । तपाईको कम्प्युटर ह्याक गर्न के/कस्ता कदम चाल्नु पर्छ भन्ने कुरा तिनीहरुलाई राम्ररी थाहा छ ।